In ka badan 1,500 oo carruur ah ayaa lagu daweeyey tas-hiilaadka caafimaad ee cusub ee ay MSF ka furtey Muqdisho - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Médecins Sans Frontières/Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn ayaa tas-hiilaad caafimaad oo cusub ka furtey degmada Dharkeynley, ee ku taalla Koonfurta caasimadda Soomaaliya, si ay u gargaarto tirada sii kordheysa ee dadka uu saameeyey iskahorimaadka socda.
Tan iyo 31-gii Jannaayo, ayaa NGO-ga caafimaadka ee bani’aadamnimada ee Médecins Sans Frontières (MSF) waxa ay 1,528 carruur ah, oo 62 boqolkiiba ay ka yar yihiin shan sano jir ku daweysey tas-hiilaadka caafimaadka ee ay dhowaan ka furtey degmada Dharkeynley. Carruurtaa ayaa 234 ka mid ahi waxaa lagu qaabiley barnaamijka nafaqeynta, waxaana la tallaaley 700. “Cuddurrada ugu badan ee ay kooxda caafimaadku arkeen waxaa ka mid ahaa caabuqyada neef-mareenka, cudurrada maqaarka iyo shuban. Dhab ahaantii dhammaan xanuunada aan aragney waxa ay la xiriireen xaaladaha nololeed ee aan degganeyn ee dadku ku nool yihiin,” ayaa ay tiri Alexandra Rutishauser-Perera oo ah isuduwe mashruuc.
Muddadaa dhexdeeda, 1,113 carruur ay da’doodu ka yar tahay 15 sano jir ayaa laga tallaaley jadeeco ka dib markii afar bukaan oo qaba cudurkaas sida weyn u faafa la soo seexiyey tas-hiilaadkan/xaruntan caafimaadka. Maaddaama carruurta yaryari ay yihiin kuwa ugu nugul, ayaa u gargaaridda carruurta ka yar 12 sano jirka ay noqoneysaa waxa ugu weyn ee ay xoogga saareyso xarunta caafimaadka, taas oo quudin ku daweynta bukaannada nafaqo-xumadu hayso iyo tallaal joogto ah iyo waxyaabo kaleba u sameyneysa carruurta.
Xaawo*, oo ah hooyo shan carruur ah leh, ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee yimaada xarunta caafimaadka. Dhowr ka mid ah carruurteeda ayaa qabey shuban biyood, awoodna uma ay helin in ay daaweyn taabogal ah u hesho. “Aad ayaan ugu farxay markii dadka degaanka ay ii sheegeen in MSF ay tas-hiilaad caafimaadka ka fureyso degaankan Dharkeynley,” ayaa ay tiri. Xaawo si fiican ayaa ay u taqaannaa MSF; ka hor intii aaney imaanin Dharkeynley, waxa ay Yaaqshiid uga qaxdey Kaaraan, halkaas oo MSF ay sidoo kale ku lahayd tas-hiilaad caafimaad. “Dhammaan carruurteyda – laga soo bilaabo kan ugu yar oo jira laba sano ilaa kan ugu weyn, oo hadda 10 sano jir ah – waxaa lagu tallaaley tas-hiilaadka MSF. Maanta wixii ka horreeyey, waxa aan mararka qaar is dhihi jirey haddii aad heli lahayd adeegyo wanaagsan oo la mid ah kuwii aad hore u heli jirtey.”
Laakiin tas-hiilaadkan dharkeynley ayaa ah mid aad uga yar oo aan buuxin karin baahida sarreysa ee halkaan ka jirta. Soomaali ka soo qaxaysa rabshad ayaa si joogto ah u yimaada degaanka waxaana ilaa iyo hadda, ay helitaanka daryeel caafimaad ay ahayd mid aad u kooban. MSF waxa ay sidoo kale ka shaqeyneysaa sidii ay u ballaarin lahayd hawlgalkeeda iyada oo tas-hiilaad kale oo caafimaad ka fureysa degmada tan deriska la ah ee Wadajir. Xaruntan cusub waxa ay daryeel caafimaad oo aasaasi ah siineysaa dadka waaweyn iyo carruurta, waxaana ay sidoo kale bixineysaa adeegyada daryeelka hooyada iyo dhallaanka, iyo nafaqeynta.
MSF waxa ay si joogto ah uga shaqeyneysay Soomaaliya tan iyo 1991-gii waxaana ay hadda daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ku bixisaa siddeed gobol oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka mid ah. In ka badan 1,300 oo shaqaale Soomaali ah, oo ay taageerayaan ku dhowaad 100 shaqaale ah oo jooga Nayroobi, ayaa bixiya daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, daaweynta nafaqo-xumada, daryeel caafimaad iyo taageero la siiyo dadka soo barokacay, qalliin, qaybinta biyaha iyo sahayda kale ee gargaarkaba. MSF kama qaadato dowlad wax maaliyad ah oo ay ku fuliso mashaariicdeeda Soomaaliya, waxaana dhammaan maaliyaddeedu ay ka timaaddaa deeq-bixiyeyaal gaar ah.
Tags: Banaadir, dagaal, Muqdisho, Xarun cusub